आमा बन्दै श्वेता खड्का ! सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यो सत्यता नै हो ! – Newsharpal24
आमा बन्दै श्वेता खड्का ! सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यो सत्यता नै हो !
December 10, 2020 adminLeaveaComment on आमा बन्दै श्वेता खड्का ! सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यो सत्यता नै हो !
चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री श्वेता खड्काले नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने भएकी छन। उनी अभिनीत चलचित्र ‘कान्छी’ दुई वर्षअघि प्रदर्शनमा आएको थियो।
अहिले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिँदै आएकी उनी यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्रमा अनुबन्धित भएकी हुन्। ‘हुर्रे’, ‘मेरी मामु’ र ‘रज्जा रानी’ निर्देशन गरेका यमको निर्देशनमा बन्ने नयाँ चलचित्रमा श्वेताले काम गर्न लागेकी हुन्।
चलचित्रमा उनी आमाको भूमिकामा देखिने छिन्। चलचित्रले आमा र छोरीको भावनात्मक सम्बन्धको कथा भन्ने छ। कोरोना महामारी र लकडाउनको अवस्था सहज हुनेबित्तिकै चलचित्रको छायांकन सुरु हुने बताइएको छ।चलचित्रमा छोरीको भूमिकामा सेड्रिना शर्मालाई लिने प्रयास भइरहेको छ।
डेब्यु चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट लभर गर्लको भूमिकामा देखिँदै आएकी श्वेतालाई पहिलो पटक दर्शकले भिन्न भूमिकामा देख्न पाउनेछन्। चलचित्रमा उनको केन्द्रीय भूमिका छ। चलचित्रमा समावेश अन्य कलाकार तथा प्राविधिकको जानकारी कही समयमा गराउने निर्देशक थापाले बताए।
मिका र स्वराले कंगनामाथि पोखेआक्रोश
६ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको बसबाट खसेर घटनास्थलमै मृत्यु
लाखौं श्रोताहरुले रुचाएको गीतको गायकलाई कसैले चिन्दैनन् ,बाँच्नै गार्हो भएपछि विदेश जाँदै
ज्योति मगर भन्छिन ‘अब त मलाई पनि विवाहको रहर जागिसक्यो’